Daraasad: Sigaar-cabayaasha Sigaar-cabbayaasha waxay nuugaan Maaddooyinka Sunta ah ee ka Yar Sigaar-cabayaasha • Daawooyinka Inc.eu
Marka laga hadlayo sunta galaya jirka inta lagu guda jiro fadhiga sigaar cabista, tubaakada sigaarka caba waxay ka badan yihiin dadka kaliya ee isticmaala xashiishka.
Taasi waa gabagabada daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Nicotine & Tubaakada Cilmi baarista, taas oo lagu ogaaday in dadka caba sigaarka caadiga ah ay leeyihiin khataro caafimaad oo sun ah marka loo eego kuwa sigaarka caba ama kuwa isku dara.
Maado sun ah - marka la barbardhigo sunta, oo si dabiici ah u dhacda - waa kiimiko sun ah oo dad samee oo laga helo waxyaabaha lagu daro sigaarka iyo wax soo saarka kale ee warshadaha.
Daraasaddan, cilmi baarayaal ka tirsan Jaamacadda Minnesota ayaa isbarbar dhigay kala duwanaanshaha soo gaadhista walxaha sunta ah ee u dhexeeya saddex nooc oo sigaar cabayaal ah. Hal koox ayaa sigaar cabbay labadaba cannabis sida tubaakada, iyo kooxaha kale waxay cabi jireen tubaakada ama xashiishadda oo keliya.
Baarayaasha ayaa qortay 53 qof oo sigaar cabaya waxayna qiyaaseen heerar sun ah kooxaha dhexdooda iyadoo loo marayo tijaabooyinka neefta iyo kaadida ee la qaaday subaxdii kadib fadhiga sigaar cabista.
Si loogu qalmo daraasadda, dhagxaanta dhagxaanta waa inay cabaan weed ugu yaraan hal mar usbuucii dadka sigaarka cabaana waa inay cabaan in ka badan shan sigaar maalintii.
Daraasadu waxay ogaatay in dadka labada koox ee tubaakada ku jira ay leeyihiin heerar sare oo kaarboon monoksaydh la soo saaray, kuwaas oo lagu soo warramey cuduro nidaamsan oo lagu arkay cudurada neef mareenka, waxay u badan tahay inay sabab u tahay barar ku dhaca jirka.
Kaliya kuwa sigaarka caba ayaa neefsada 'si weyn' heerarka hoose ee sunta waxyeellada leh
In kasta oo dadka isticmaala kaliya marijuana ay la kulmaan heerar aad u hooseeya oo ka mid ah xeryahooda waxyeelada leh marka loo eego kuwa sigaarka caba, haddana wali waxay la kulmaan heerar sun ah oo ka sarreeya qof aan sigaar cabbin haba yaraatee.
Dhammaan kooxaha waxay muujiyeen heerar isku mid ah taranka taranka ee loo yaqaan 'phenanthrene tetraol', oo ah xarun laga helay kaadida dadka sigaarka caba ka dib markii ay liqaan phenanthrene, oo lagu tilmaamay inay tahay mid aan sun lahayn oo aan kansar lahayn.
Studies waxay soo jeedineysaa in dadka qaarkii ay awoodaan inay ka takhalusaan kiimikooyinka sida phenanthrene tetraol dhibaato la'aan, halka kuwa kale ay soo gaarayaan dhaawac soo gaara unugyadooda oo aakhirka u horseeda kansar.
Daraasadda ayaa sidoo kale sharraxaysa in dadka isticmaala xashiishka ay mararka qaarkood soo bandhigaan walxo sun ah oo ay u badan yihiin kuwa sigaarka caba, taasna waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay iyadoo aan ogaal loo isticmaalin tubaakada leh wejiga isla waqtigaas, iyadoo la tixgelinayo maqnaanshaha fududaanta xashiishka, ama lagu dhex daro hadallo buurbuur ama buuq leh.
kuwa xashiishka caba daawada neefsashadaiyo "si weyn" heerarka sunta waxyeelada leh (afb.)
Tubaakada sigaarka caba waxay muujisay heerar sare oo kansarka sambabaha oo xoog leh NNAL, walax sun ah oo inta badan laga helo sigaarka oo lagu ogaaday inuu sababo kansarka daraasadihii hore.
Sunta kale ee laga helay inay ka sareyso kooxaha tubaakada waxay ahayd 2-HPMA, molecule lagu sii daayay kaadida ka dib markii ay ku dhacday propylene oxide, wakiil mutagenic iyo kansarka.
Sida laga soo xigtay Machadka Kansarka Qaranka ee Mareykanka, in ka badan 7.000 oo kiimiko ah oo ku jira qiiqa tubaakada, ugu yaraan 250 ayaa loo yaqaanaa inay waxyeello leeyihiin, oo ay ku jiraan hydrogen cyanide, carbon monoxide iyo ammonia.
Ilaha ao Academic (EN), Khadka Caafimaadka (EN), Mugglehead (EN), WestWord (EN)
cannabiscaafimaadkacilmi baarissigaar cabin
Netherlands - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talooyin Sharci) (@ KHLA2014). Dhammaan tallaabooyinka ay dowladdu ...
Marijuana waa wax la qabatimo oo waxyeello ka badan khamriga ama sigaarka
Cannabis waa magaca caafimaad ee marijuana loo isticmaalo adduunka oo dhan daawo ahaan ama ujeedooyin madadaalo ...
Magaalooyinka ugu wanaagsan Ameerika ee loogu talagalay heerarka xashiishadda heerka xiga
Wax ka yar toban sano ka hor, Amsterdam waxay ahayd meesha la joogo haddii aad ...